Raila oo Kenya dib ugu soo laabtay - BBC News Somali
Raila oo Kenya dib ugu soo laabtay
Hogaamiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee Cord ahna Raisalwasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa galinkii dambe ee maanta kusoo noqday dalka Kenya, in kabadan labo bilood oo uu ku maqnaa wadanka Maraykanka.
Raila waxaa soo dhaweeyay xubnaha kale ee mucaaradka kala tirsan intii uusan khudbad ka jeedinin fagaaraha xoriyada ee Uhuru Park, halkaas oo uu kula hadlay dad ku dhaw halmilyan oo qof.
Raysalwasaarihii hore waxaa uu sheegay in Kenya ay wajahayso marxalado adag isla markaana dad badan oo Kenyan ah ay u dhibaataysan yihiin siyaasad xumida dawladda talada haysa.
Waxuu intaas ku daray in dhibaatada ugu wayni ay tahay amaan darida ka jirta dalka arintaasina ay saamyn ku reebtay dad badan, waxaa uu ku baaqay in dawladu aysan bartilmaameedsanin dad gaar ah iyo diin gaar iyada oo marmarsiinyo ka dhiganaysa in ay la dagaalamayso amaan darida iyo argagixisada.
Raila waxaa uu xukuumadda Jubilee u qabtay in ay la kulmaan mucaaradka ugu dambayn bisha July todobadeeda, si ay oogala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in dhibaatada Kenyan ka haysata ay sii badato.
Guddiga doorashada oo la dhaliilay
Dhanka kalana waxaa halkasi ka hadlay Madaxwayne ku xigeen kii hore ee Kenya Kalonzo Musyoka waxaana uu sheegay in doorashada soo socota aysan ka qayb gali doonin hadii ay xilka sii hayaan oo aan la eryin madaxda Guddiga Doorashada Madaxa banaan ee hada xilka haya.
Waxaa uu sheegay in madaxda Guddigaasi Doorashada maamusha hada in ay muujiyeen in ay bah wadaag la yihiin xisbiga talada Kenya haya.